ESAT News: የአብይ አህመድን ስልጣን ለማዳከም የተለያዩ እቅዶችን መንደፋቸው ተሰማ ሚያዚያ 23:2010 – Kichuu
HomeAmharicESAT News: የአብይ አህመድን ስልጣን ለማዳከም የተለያዩ እቅዶችን መንደፋቸው ተሰማ ሚያዚያ 23:2010
ESAT News : የአብይ አህመድን ስልጣን ለማዳከም የተለያዩ እቅዶችን መንደፋቸው ተሰማ ሚያዚያ 23:2010
PM #AbiyAhmed also said that it was wrong for armed men & women in military uniforms to be aggressive towards defenseless citizens and they such bad behaviors need to be corrected or brought to justice. #Ethiopia pic.twitter.com/zEuUYd9G3x
ESAT Daily News Amsterdam May 01,2018
ESAT Oduu wahiitiin gadi bahe amma. Innis jeneraalonni Wayyaanee aangoo Dr. Abiy gufachiisuuf karoora baafatan jetti. Walgahii Wayyaaneen iccitiin geggeessanirraa akka waan odeeffannoo argatanitti dubbatu. Mormiin isaaniitis ilmaan Tigraay aangoorraa fageeffamuudha jedhu. Kana akka hin fudhanne hubachiifnee tarkaanfii barbaachisu fudhanna jedhan. Ol’aantummaa Tigreen qabdu jedhamee komii ture kaasuu fi dhiibbaa Ameerikaa hir’isuuf muudama aangoo geggeeffame fudhachuun gaariis jedhan. Haa ta’uutii bakka murteessituu ammallee harkaa qabna jedhan. Aangoo naannoo irratti qabaatus ni daangessina jedhan. Dr. Abiy naannoo Tigraay irratti akka hin xiyyeeffanne goona jedhan.
Yoo odeeffannoon ESAT dhugaa tahe, Wayyaaneen aangoo dhabdee jirti. Haalli adeemsa Dr. Abiy baay’ee yaachisaa jiraachuutu mul’ata. Dr. Abiy duuba Ameerikaan jiraachuu isaati. Wanti biraa haa hafuu, ummata Tigraayis Dr. Abiy hawwachuu isaati komii isaaniirra wanti mul’atu. Humni waraanaa waa duuba hin jirre Dr. Abiy’tti garagaluun salphaa miti. Jara Wayyaanee irra dhiibbaa Ameerikaatu jira akkan hubadhetti. Kanaafuu lubbuutu bahaa jira kanaaf dhidhiitatu jedheen xiinxala.
Hamma Wayyaaneen biyya keenya keessa jirtuti nagaan oromo argamuu waan hindandeenyeef Oromon paartilee ummata Tigray bakka bu’an kan akka Arena Tigray akka biyyati galanii TPLF garagalchan jajabeesuu qabna. Isaan waliti garagalanii yoo walfixan dhimma keenya miti. Garuu warra TPLF morman hunda deeggarra.